Ubuhlungu ngemuva ekhanda kungenzeka ngenxa lenqwaba izizathu, eziningi zazo eziye ingakamiswa ngokwanele wafunda ngochwepheshe.
Ikhanda endaweni entanyeni kuyinto ezimbili zama: unomphela noma avele kuphela uma ukukhulisa noma ngokutshekisa ikhanda. Ngezinye izikhathi ubuhlungu singenzeka ngisho kuwe ukuthi iyini kwayithinta nje kwekhanda lakhe.
Izimbangela ubuhlungu obunjalo miningi. Ngokwesibonelo, uhlu olukhulu izifo yomgogodla wesibeletho (ngaso sonke isikhathi wayecabanga ikhanda) futhi ifomu njalo lesi sifo. Ubuhlungu entanyeni kubuhlungu ngempela, ngoba ungakwazi bathuthele amehlo, izindlebe, amahlombe owenza umuntu ukuba ezwe ubuhlungu nakakhulu.
Enye ezivamile imbangela ubuhlungu occipital ingxenye ikhanda kungenziwa ngokuthi miogeloz - imisipha uphawu. Ngokuvamile lokhu enkingeni kwenzeka ngemva kokuba umuntu ukuthengisa, noma-ke iyohlala isikhathi eside sesimweni ungakhululekile. Ngisho ukuma zenu ezimbi ukucindezeleka icuphe imbangela wezakhiwo.
Ukucindezeleka kwengqondo futhi ethukile njalo kungaholela siyoba yini ikhanda njalo ngemuva ekhanda. Kwabe sekuvela ukuthi, abasengcupheni kakhulu owesifazane onjalo ezingemnandi, abaneminyaka engu-30.
Uma ubuhlungu itholakala hhayi kuphela ngemuva ekhanda, kodwa futhi unika ezindlebeni, umhlathi, emqaleni nasemhlane, lokhu kungaba uphawu neuralgia emsipheni occipital. Kuqondane nokuthi ubuhlungu inyuka izindleko kuphela thimula, ukukhwehlela noma ujikise ikhanda lakhe.
Kunezimo lapho ubuhlungu ngempela kungaba yingozi:
- uneminyaka engaphezu kweminyaka engu-40 kanti ngaphambi kwalokho headaches'll neze abahlushwayo;
- Endaweni lapho okuhlatshelwa khona ubuhlungu kwenzeka, zashintsha isigubhukane;
- Ikhanda kuhambisana zimpawu: isiyezi, ukulahlekelwa esinqunyiwe inkumbulo, izinkinga umbono kanye ndikindiki ezandleni nasezinyaweni.
- ubuhlungu yaqala ukubonakala kaningi, kodwa namanje kakhulu anda.
Ngokuvamile ukubukeka ubuhlungu ngemuva ekhanda, thina kabusha wonke ngecala ukucindezeleka. Futhi lo mbono kuyinto ngaphansi engacindezeli. Kodwa lokho kumane nje odokotela bakholelwa ukuthi kaningi ubuhlungu sisekhona ngenxa imisipha.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ukuya kudokotela, ungazama izindlela eziningana ukuze aphathe bekhanda of abelaphi bendabuko:
1. Musa ukulala emini noma ekushoneni kwelanga. Lokhu ngokuvamile kubangela nokuqala kwemihelo-ubuhlungu ngemuva ekhanda. Njengoba masinyane njengoba you thatha bona abuse, uqaphela ukuthi ikhanda kuvamile kakhulu.
2. Uma sihlushwa okukhulu throbbing ubuhlungu, ungazama uwasuse ngebhandeshi Friend. Vele Tie it azungeze ikhanda lakho, futhi ngezithukuthuku buthaka onomopho, ubuhlungu ngeke buthaka kakhulu.
3. Ingabe uthanda ikhofi? Ingabe kufanele kuncishiswe ukusetshenziswa yayo 1 inkomishi eyodwa ngelanga. Yilokho nje akudingekile ukuba ngokuphelele ukuyeka isiphuzo, ngoba ngaphandle servings nsuku zonke caffeine imithambo yegazi lakho ziphelelwa nokunwebeka. Kwabe sekuvela ukuthi, i-caffeine ngokweqile hhayi kuphela kungabangela ubuhlungu, kodwa ukungabi khona, futhi.
4. Ngesikhathi ukulahla ka perfume toilette, amakha nezinye izinto. flavour Zinamandla ngokuvamile imbangela ngokuhlasela ikhanda.
5. Ungakhohlwa ngokudla njalo. Akufanele weqa ukudla noma silinde size sibhekane ngesikhathi eyinhloko. Isimo sengqondo esinjalo izidingo eziyisisekelo umzimba wakho kungaba imbangela wezakhiwo. Lokhu kungenxa yokuthi bikho kwezakhi kubangela ukuvaleka imithambo yegazi kanye, Ngakho-ke, kuholela wezakhiwo.
Uma ekugcineni ukudla, kwakheka imithambo yegazi ukwandisa futhi kuyoba khona ngisho kakhulu throbbing ubuhlungu. Ngaphezu kwalokho senze isimo sishube kungenzeka ushingamu. Empeleni, ngalé nje izimbangela ababaliweyo kubo ubuhlungu, kukhona ngephimbo elifanayo okuphindayo ukuhlafuna ezinyakazayo.
6. Zama ukugwema noma nini uma kungenzeka ezindaweni ezinomsindo, ukuvikela amehlo akho kusukela Ukukhanya kwelanga futhi ukubukela i-TV kancane. Uma umsebenzi wakho uhlanganisa esihlalweni unomphela at computer, uthathe amakhefu kaningi ngangokunokwenzeka.
Nazi amathiphu eziyisisekelo namasu, kodwa akusho lokho ngempela kudingeka ngihlolwa.
Unozinti futhi unozinti - lokho kukunye nokuthi okufanayo?
Sneezing ngesikhathi sokukhulelwa: izimbangela kanye nezici ukwelashwa